Category: Fiaran-dalamby any Soeda
Home > Fiaran-dalamby any Soeda
Fotoana famakiana: 5 minitra Tsy misy na inona na inona tena toy nanjono voalohany ao amin'ny toerana vaovao. Fa misy angler, na naniry na feno traikefa, jono dia asa sarobidy izay manampy azy ireo miala voly. Inona no mety ho tsara kokoa ho azy ireo noho ny fizahan-tany sy ny fanakambanana toerana tena tianay? Soa ihany…
Fotoana famakiana: 3 minitra Underground Art amin'ny metro toby toa ny vaovao tranombakoka ny olona. Izy ireo dia tsy maintsy lasa ny vaovao-mahita toerana ho an'ny zavakanto sy ny famolavolana mpankafy. Iza moa no mba nieritreritra? Ny sasany manome aingam-panahy indrindra sehatra-bahoaka, incorporating large-scale art and design can be found…